Kunjani ukunakekelwa okudingekayo ukuze izinwele zakho zihlobo?
Intombazane ngayinye inezinhlobo ezahlukene zezinwele. Omunye unezinwele ezinde futhi ezinesibindi, ezinye zinezinwele ezomile, ezinye zinezinwele ezikhazimulayo, kanti ezinye zinamawele amancane. Kuye ngohlobo lwezinwele, kubalulekile ukukhetha izindlela ezikhethekile zokunakekelwa kwazo. Khona-ke izinwele zizobukeka ziphilile futhi zizokujabulisa ngokubonakala kwayo.
Uma izinwele zakho zincane, khona-ke kuyadingeka ukuba uhambisane nezincomo zokunakekelwa okunjalo:
Sebenzisa kuphela lezo shampoos ezenzelwe ubuningi bezinwele. Ngokuvamile izinwele ezincane azidingi ukunyusa okunye okunye, njengoba kungokwemvelo kunomsoco.
Ngokwezinwele ezincane kudingeka ukhethe isimiso esifanele. Okokuqala akufani. Kungcono ukunikeza okuthandayo kuma-air conditioners ane-proteine ​​yemifino yama-oats noma ukolweni. Isimo sezulu esinjalo sizokwenza izinwele zakho zibe zikhulu, futhi zisho ngaphezulu.
Phakathi kwemikhiqizo yakho yokunakekelwa kwezinwele, kumele kube yilokho okwakhiwa keratin. I-Keratin isiza ukulinganisela umswakama ongaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi izinwele ziba lula futhi zilahlekelwe ivolumu.
Amaphilisi okusawoti - lokhu kungenye yezinto ezinhle kakhulu, ezenzelwe ukubeka izinwele ezincane. Izifutho ezinjalo zinamathisela ivolumu yemvelo ezinweleni futhi zenze ukuthi izitshalo zivezwe ngaphezulu.
Izinwele ezinomzimba ngokuvamile zivutha kakhulu. Ukuze ugweme lokhu, thenga ibhulashi e-antistatic. Kuyasiza kakhulu izinwele, ngoba ayiziphuli ngesikhathi sokulwa.
Izinwele ezibucayi ezinconywayo azikhuthazwa ukusetshenziswa:
Ama shampoos okuhlanza agagressive. Ngemuva kwezinyathelo ezinjalo, isikhumba sekhanda siqala ukukhiqiza amafutha amaningi, okusho ukuthi izinwele zakho zizoba zingcolile kakhulu.
Ungasebenzisi "ababili kokukodwa". Zinezinto eziningi ezenza izinwele zakho zibe nzima kakhulu.
Gwema imikhiqizo yezinwele equkethe amafutha. Amafutha ngokushesha "bulala" yonke ivolumu.
Ngokwezinwele ezincane, akukhuthazwa ukusebenzisa izinsimu ezishisayo, ngoba zikhulu kakhulu.
Ungasebenzisi ama-combs anamazinyo ensimbi, awonaka izinwele ezinhle.
Ukuze izinwele ezincane zibukeke kahle, kunconywa ngezikhathi ezithile ukuvakashela salonkasoty futhi wenze inqubo "Therapy Botanical", okuzosiza ukujwayelekile isimo se-scalp. Esikhathini salon omuhle, inkosi kufanele iqale ukuxilongwa nge-scalp nezinwele zakho, bese usekelwe emiphumeleni, uthathe amafutha afanele. Inqubo iyamnandi kakhulu futhi izobheka zonke izintombi. Okokuqala, bayosigeza bese begeza ikhanda, bese befaka izinwele nge-cocktail yokuphefumula okunomsoco we-amino acids, amaprotheni nezinye izakhi. I-Navolosov i-cocktail yokwelapha kufanele ibe imizuzu engu-10-15, bese ihlanzwa.
Uma ungumnikazi wezinwele eziphuzile, khona-ke sikukwazisa ukuba ulandele iziqondiso ezilula zokuzinakekela:
Khetha ama-shampoos angenawo ama-sulfate. Into yokuthi ama-sulfathi adibanisa kakhulu izinwele, futhi awudingi neze, ngoba izinwele kunzima ukuzihlanganisa ngaphandle.
I-air conditioners engcono kakhulu yezinwele ze wavy yilabo abanamaprotheni amasondo. Amathuluzi anjalo azokusiza ukwenza ama-curls ahlonishwe kakhulu futhi ahlungwe kahle ngaphandle komzamo.
Khetha ama-masks angaqondakali. Bathuthukisa kangcono izinwele futhi bahlinzekele inqubo yokulwa.
Ukhilimu wezinwele ezinamafutha akufanele kube nokuthungwa okunamandla kakhulu noma okuketshezi.
Ngaphambi kokuhlanza kwekhanda, hlanganisa izinwele ngekhekhe elinamazinyo amakhulu.
Ama-Shampoos, aqina kakhulu. I-Foam eyengeziwe izokwenza ama-nodules amaningi ezinyaweni zakho futhi ukuwabulala ngeke kwenzeke.
Njengomthetho, ama-shampoos owomile wezinwele ezigobile azifanelekile, ngoba isikhumba sekhanda lakho sesivele sesomile.
Ukusetshenziswa kusho ukuthi ivolumu ayinalutho. Okufanayo kusebenza kuma-gels ezinwele.
Uma ungafuni izinwele zakho ziqhume, ungasebenzisi amabhulashi.
Ukwenza kube lula ukunakekelwa kwezinwele ezibukhali kungaba nezinqubo ze-salon. Ungakwazi ukuwaqondisa ngokuphelele nge-keratin ukuqondisa. Kuye ngesimo sezinwele, bazokhetha imikhiqizo ekhethekile futhi bayisebenzise ukugeza izinwele. Ngemuva kwemizuzu engu-20-25, izinwele zakho zomile futhi ziqondiswe nge-ironing. Ngemuva kwenqubo enjalo kwezinsuku ezintathu, awukwazi ukugeza izinwele nezinwele zakho. Uma inqubo yenziwa ngekhwalithi, umphumela uzokujabulisa izinyanga ezintathu kuya kwezine.
Izinwele ngemuva kokubala noma imvume
Ukulimala ngopende noma kumakhemikhali, izinwele zidinga ukunakekelwa okukhethekile. Okuhle kakhulu kulezi zinwele kuzoba:
Ukusetshenziswa kwama-shampoos, angenawo ama-sulfate. Ama-sulfates awanciphisa kakhulu izinwele ngaphakathi.
Ukusetshenziswa kwama-balms-balms-balms. Benza kahle izinwele, ngaphandle kokuzenza zibe nzima kakhulu.
Ukusetshenziswa njalo kwama-masks we-moisturizing and conditioning for hair. Izinwele ezilimazayo ukuntuleka komswakama.
Uma izinwele zikhishwa emvuleni, ke abanakho umswakama okwanele. Ezimweni ezinjalo, kungcono ukusebenzisa u-cream styling for styling.
Ukusetshenziswa kwekhefu namazinyo epulasitiki. Ukuboya izinwele okunjalo kuzokwenza izinwele zibe zithambile futhi zibushelele.
Ama-Shampoos, aqukethe ama-surfactants. Zama ukusebenzisa ama-shampoos, aqukethe izinto eziningi zemvelo.
Ungasebenzisi i-rinse aid aid ye-volume yezinwele. Ngethuluzi elinjalo, kunezinsiza ezimbalwa kakhulu zokubeka isimo.
Amaski anamaprotheni amaningi angenza izinwele zakho zibe zikhulu futhi zibuthakathaka.
I-Vsalone ingathuthukisa isimo sezinwele zakho ezimelekile. Amasters basebenzisa le ndlela ekhethekile yokunakekelwa kwezinwele: ama-shampoos, ama-serum, ama-masks, ama-sprays. Futhi akulimazi ukuthola imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele zezinwele.
Izinwele ezinamahloni nezinwele
Yini edingekayo ezinwele ezinjalo:
Izinwele ezinjalo zithandwa njengesiponji. Ngakho-ke sebenzisa ngangokunokwenzeka izinwele ngezinto eziwusizo: lipids, ceramide, amafutha nezinye izakhi.
Khetha kuphela lezo zimoya zomoya, eziqukethe i-keratin.
I-mask ejulile yinqwaba kulabo abanezinwele ezinamafutha.
Amafutha azosiza ekubunzeni izinwele.
Sebenzisa ama-combs anamafutha ahlangene.
Izinwele zakho azidingi:
Ama-Shampoos, aqina kakhulu.
Ungabeki ikhanda lakho nge-dryer yezinwele kumodi eshisayo, kungcono ukushintshela kwimodi efudumele.
Ungasebenzisi izinwele zezinwele ze-wax.
Amanye amalungu omzimba anikeza inqubo enjalo yezinwele, njenge "Fibroplasty." Le nqubo ibuyisela izinwele ezibushelelezi, ubuningi futhi zikhanyise. On izinwele pre-wageza isetshenziswa i-cocktail ekhethekile, lapho kunezinto ezigcwalisa i-porosity ezinyaweni. Ngaphezu kokugqoka, i-mask isetshenziswa, eqinisa isenzo sayo futhi ibuyiselwe isakhiwo sezinwele. Esikhathini sokugcina, izinwele zimbozwe nge-serum ekhethekile ebeka uphawu lokupheka futhi ilulaza izikali ezivulekile.
Ukungahle kube kuhle ukufaka. Namuhla ezitolo ungathola inombolo enkulu yezinhlobonhlobo zemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele. Akunzima nakancane ukuthola lezo ezihambisana nezinwele zakho. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthi uthenge lokhu noma lokho kulungisa, qiniseka ukuthi ufunda ukuthi uluphi uhlobo lwezinwele oluhloswe nokuthi yini ehlanganisiwe ekubunjweni kwalo.
I-Pantene Pro-V ilulame kakhulu
Izinhlobonhlobo zezinyosi zezinwele
Amaski nama-balms ezinwele: izikhambi zabantu
Amaski okudla ngokumelene nokulahlekelwa izinwele
Kungenzeka yini ukwenza amaphuzu avelele eCalifornia?
I-shampoos yemvelo yezinwele ezinamafutha: izindlela zokupheka ezenziwe ngokuzenzela
Amanothi wezinwele zebusika ukunakekelwa kuka-Elixir Ultime kusuka ku-Kerastase
Indlela yokunakekela ama-roses ekhaya?
Uma ingane ishisa elangeni
UVgeni Plushenko wabonisa indodana yakhe endala
Amathiphu Wokulungisa Abaqalayo
Umculi wabantu base-USSR uNonna Mordyukova ushonele
Umzamo # 3: URezo Gigineishvili ubonise ukuthi ubani owashintshanisa uNadya Mikhalkov, isithombe
I-manicure ephelele kuze kube yizinsuku ezingu-10 nge-lacquers e-ceramic esuka ku-LCN
Apple amazambane aphethwe ubusika - zokupheka zokuvuna ekhaya. Indlela ukupheka puree kusuka apula ingane nge ngezandla zabo siqu
Indlela yokukhulisa ingane ngokuzethemba?
Isaladi nge-celery kanye ne-cottage shizi
Izingane zamathoyizi ezemfundo ezivela eminyakeni emibili
Ukuphila komuntu siqu kaNastya Zadorozhnaya
Ezweni lezilwane: "ingwe" yengubo - 2016
29 Izindlela Zokulungiselela Lonyaka Omusha
Thenga ingubo yomshado omuhle